Jidadka Jigjiga oo caawa bandoow ah iyo xaalka deegaanka Tuliguuleed – Radio Daljir
Jidadka Jigjiga oo caawa bandoow ah iyo xaalka deegaanka Tuliguuleed
Agoosto 22, 2019 9:02 g 0
Jidadka caasimada Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) ee Jigjiga ayaa galabta illaa iyo caawa waxaa saaran bandoow aan loo oggolayn in wax gawaari ahi maraan jidadka. Bandoowga ayaa salka ku haya wafuud ka socota Federaalka oo Jigjiga yimid, loogana bartay markii ay deegaanka yimaadaan in la xayiro dhammaan gaadiidka magaalada illaa uu shirku ka dhammaanayo.
Xubnaha dowladda Federaalka ee Jigjiga yimaada ayaa badanaa loo bannadaa magaalada, waxaana illaa saaka laga soo bilaabo xidhan dhammaan jidadka laamiyada ah ee magaalada dhexmara. Shacabka iyo taksilayaasha ayaa isku ciriiriya luuqyada aan laamiga lahayn ee Jigjiga.
Wariyaheena Jigjiga ayaa Daljir la qaybsaday in illaa iyo hadda uusan jirin masuul masuuliyiinta magaalada Jigjiga kamid ah ama mid matala DDS oo ka diirnaxa silica haysta shacabka Jigjiga. Wariyaha ayaa ku sii daray in “xadgudubyada lala beegsado shacabka deegaanka aysan ku koobneyn xorriyada hadalka oo laalan ee xataa ay jiraan xadgudubyo joogto ah oo lala beegto muwaadiniinta iyo ganacsigooda.”
Dhanka deegaanka Tuliguuleed oo ay laba maalmood kahor ku soo duuleen maleeshiyaadka oramada, haddana ay si wadajir ah u joogaan ciidamada militariga Itoobiya iyo isla maleeshiyaadkii Oramada ee soo duulay, dhaawac kooma sababeyna u gaarsiiyey Guddoomiyihii Tuliguuleed, ayeysan illaa iyo hadda weli jirin masuul ku sugan Jigjiga ama masuul kamid ah masuuliyiinta DDS oo ka hadlay duullaanka lala beegtay Tuliguuleed ama xataa Guddoomiyaha ku booqday cisbitaalka.
Diiwanka wararka DDS